SALAMO 58	F. 2 | Fitandremana Ankadifotsy
SALAMO 58	F. 2
Ireo mpitsara tsy marina (1). Samy antsoin’ny Baiboly ho mpitsara avokoa na ireo mpitsara eny amin’ny tribonaly na ny mpitondra. Voalaza eto fa tsy marina ny fitsaran’izy ireo.
Ny faharatsian’nyolona (2-5). Samy mpanota avokoa ny olombelona taranak’iAdama rehetra raha vao teraka. Tsy ny tontolo no manaratsy azy fa avy ao amin’ny fony no hiaingan’izay zavatra ratsy rehetra tanterahiny ary mitatra manerana ny tany izany. Hita izany amin’ny zazakely izay manafina ny hadisoany sahady na mandainga mihitsy. Ny zavatra rehetra atao sy lazain’ny olona dia miteraka faharavana sy fahafatesana avokoa tahaka ny menarana. Ny fahasamihafan’ny olona dia misy ireo mihaino anatra ka miaiky ny faharatsiany ary miova, fa misy kosa ny tsy mety mihaino ka dia hiharan’ny fitsarana no hiafarany.
Ny vavaky ny marina (6-9). Tsy ny hahafaty ny ratsy fanahy loatra no tanjon’ireto tonom-bavaka fito ireto fa ny hahatonga ny teti-dratsiny tsy hahomby. Mampiseho koa anefa ity vavaka ity fa tsy haharitra mihitsy ny ratsy fanahy fa ho levona no hiafarany. Ny fitaizantsika ny zanatsika, na ara-moraly, indrindra ao amin’ny Tompo ihany koa dia mahatonga ny faharatsiana tsy hahomby eto amin’ny firenena.
Ny fandresen’ny marina (10-11). Ny marina dia ireo izay nahazo fanamarinana avy amin’ Andriamanitra noho ny fihainoany ny Tenin’Andriamanitra sy ny fanekeny an’i Jesoa Kristy maty ho azy ireo teo amin’ny hazo fijaliana (Salamo 24.5; 2Korintiana 5.17). Raha fahafatesana no hiafaran’ny ratsy fanahy dia fifaliana kosa ny an’ny marina (Apokalypsy 19.13-18). Ety an-tany dia efa hitantsika fa misy Andriamanitra mitsara ary manome valisoa ny marina Izy.